CCHA : be mpitady ny fampianarana mihira | NewsMada
CCHA : be mpitady ny fampianarana mihira
Tao anatin’ny 15 taona nijoroany, tena nahafantarana ny Cours de clavier Hery Andriatahina (CCHA) ny fampianarana mitendry « clavier », indrindra ny fitendrena any am-piangonana sy ny fitendrena hira ara-pilazantsara. Nanomboka tamin’ity taona ity anefa, nivelatra amin’ny fampianarana mihira ihany koa ny sekoly. Anton’izany ny hoe mihabetsaka ireo mitady toeram-pampianarana mihira, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra.
Ho an’ity sekoly ity, mifantoka kokoa amin’ny fampianarana mihira ao anatina antoko mpihira na « chorale » ny atolotr’izy ireo. Fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ny fahaiza-mitendry, izay zaraina amin’ny hafa. Noho izany, rariny raha enti-midera ilay Nahary ny talenta nomeny. Izay no anton’io safidy io, raha ny voalazan’ny mpanorina ny sekoly.
Raha tsiahivina, manamarika ny faha-15 taona nijoroany ny CCHA amin’ity taona ity. Ezaka lehibe hotanterahiny, ao anatin’ny 15 taona manaraka, ny fanitarana sy fampiroboroboana ity fampianarana hira ity. Ankoatra ny eto Antananarivo, ahitana sampan’ity sekoly ity avokoa ireo tanàna lehibe amin’iny lalam-pirenena fahafito iny, hatrany Antsirabe.
Mikasika izay fanamarihana tsingerintaona izay hatrany, hosantarina amin’ny fotoam-pivavahana ny hetsika, ny 12 marsa izao. Samy hanatanteraka fampisehoana kosa ny mpianatra amin’ireo sampan’ny sekoly, ny 28 mey. Tsy hifarana ny fankalazana raha tsy ny 12 novambra 2017.